8 plugins oo loogu talagalay Adobe After Effects oo nashqadee kasta ay tahay inuu ogaado | Abuurista khadka tooska ah
Adobe ka dib Raadka Waa mid ka mid ah softwares-yadaas in naqshadeeye kasta oo naqshadeeya dhaqdhaqaaqa uu shaki ku jiro ogaado sababta oo ah waxay noqon kartaa mid ka mid ah softwares-yada ugu badan ee la qaadan karo ee suuqa yaalla. Suurtagalnimada in lagu daro qalabyada iyo kordhinta astaamahooda waxay ka dhigeysaa mid aad waxtar u leh in lala kulmo nooc kasta oo halabuur iyo mashruucyo ah.
Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa xul ah 8 plugins oo loogu talagalay Adobe After Effects oo aad ka heli karto waxqabad badan (in kastoo aad liiskan ku buuxin karto maqaalkan waxaan sameynay dhowr bilood ka hor):
1 Dhibbanaan Qaas ah
2 Cunsurka 3D
4 Nalalka indhaha
6 Sii wad dhameystiran
Dhibbanaan Qaas ah
Cajaa'ibadani waxay noo oggolaan doontaa inaan ku horumarinno curintayada dhammaan noocyada walxaha caadada ah ee Adobe After Raadka qiiqa ilaa roobka, daruuraha, boodhka, ama walxaha iftiinka. Xaqiiqadu waa wadar, labadaba dabeecad ahaan ama muuqaal ahaan maadaama ay raacayso qawaaniinta fiisigiska iyo culeyska. Adoo adeegsanaya gaar ahaan Trapcode waxaad ku abuuri kartaa nooc kasta oo jajab ah oo ku saleysan xariiqyo, qaabab, qaabab meelaha saddex-cabbir ah. Sida aad u malayn doonto ma aha bilaash laakiin waxay leedahay nooc tijaabo ah oo bilaash ah oo la soo dejiyo.
Waa wax aad loo jecel yahay oo waxaa abuuray videocopilot si loogu oggolaado isticmaaleyaashu inay rartaan una adeegsadaan moodooyinka 4D ee Adobe After Effects. Way ku fiican tahay gaar ahaan kuwa aan khaas ahaan ahayn kuwa jilista ku dayashada softwares sida Maya ama Cinema XNUMXD. Qalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad soo dejiso oo aad wax ka beddesho moodooyinka qaab aad u dhakhso badan. Fidinta ayaa si la yaab leh u shaqeysa iyadoo la tixgelinayo howlaha ay u keento barnaamijka. Sidoo kale, dhawaanahan waxay soo martay cusbooneysiin ay ka mid yihiin tiro badan oo astaamo dheeri ah sida qarsoodi, awood u lahaanshaha iyo wax ka beddelka nalalka daafaha iyada oo loo marayo presets kala duwan.
Qalabkan cajiibka ah wuxuu na siin doonaa awood aan ku yareyno dhammaan noocyada walxaha ama walxaha qaab dhismeedkooda aasaasiga ah isla markaana sidan ku gaarno natiijo farshaxanimo, joomatari iyo dhiirigelin baaxad leh leh. Waxay ku shaqeysaa iyada oo loo marayo .obj taageerada sidaa darteed waxay noo ogolaaneysaa inaan si aan kala go 'lahayn uga soo dhoofino moodooyinka inta badan barnaamijyada 3D ee muuqaallada leh. Waxay na siinaysaa fursado kala duwan oo kala duwan waxayna dhammeyneysaa muujinta awoodda lagu abuurayo naqshad caan ah oo isku xirnaanta qaab-dhismeedyo saddex-cabbir leh. Dhammaan walxaha ku jira Plexus sidoo kale waxay la shaqeeyaan kamaradaha 3D iyo qoto dheer ee duurka. Qiimaheedu waa ilaa 200 oo doolar inkasta oo intaadan gacanta ku dhigin aad heli karto nooc tijaabo ah.
Marka lagu daro saameynta nalalka ee muuqaalkeena waxay siin kartaa xiiso badan muuqaaladeenna. In kasta oo ay jiraan noocyo kala duwan oo fiilooyin ah oo u shaqeeya sidii dhaliyayaal saamaynta nalalka muraayadaha indhaha, haddana mid ka mid ah kuwa ugu badan ee lagu taliyay ee weliba caan ku ah ayaa ah Fiilooyinka Fudud Sidan oo kale, isticmaaleyaashu waxay awoodi doonaan inay abuuraan muraayado muraayad shaqsiyeed oo had iyo jeer ka shaqeeya deegaanno badan. Qalabkaan waxaa loogu talagalay in lagu helo xalka ugu macquulsan iyada oo loo marayo isticmaalka saameynaha sida aberration chromatic. Kaabistani waxay horeyba ula timid maktabad waxayna sidoo kale bixisaa nooc tijaabo ah inkasta oo leh calaamadeyn.
Qalabkani wuxuu ka shaqeeyaa bey'ad laba-cabbir leh waxayna u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay ku dabaqaan fiisikiska adduunka dhabta ah walxaha 2D. Gaar ahaan Newton wuxuu bixiyaa suurtagalnimada in lagu dabaqo culeyska siyaabo kala duwan oo ay ku jiraan xulashooyin lagu nidaaminayo miisaanka culeyska, magnetismka iyo sifooyinka wareegga go'an. Intaa waxaa sii dheer qalabkani wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay abuuraan aalado fiisikis oo macquul ah si ay u matalaan meerisyada, bistooladaha, ilo-biyoodka iyo masaafada qeexan. Waa nooc ka mid ah nooca caymiska.
Sii wad dhameystiran
Qalabkaan waxaa laga yaabaa inuu yahay Midiyaha Ciidanka Switzerland ee Adobe After Effects. Inta lagu gudajiro 'Continuum' adeegsadayaasheeda waxay ka heli doonaan boqolaal saameyn oo daboolaya ujeedooyin kala duwan. Laga soo bilaabo cillado ilaa matoorrada dhammaan noocyada, saameynta muhiimka ah ee chroma, muraayadaha indhaha iyo xalalka iyo iwm dheer. Continuum waxay bixisaa xalal fara badan oo loogu talagalay noocyada kala duwan ee mashaariicda. Dabcan, qiimaheeda waa in la sheegaa inay aad u sarreyso, qiyaastii kun doolar.
In kasta oo ay duug tahay, haddana hubaal waa mid ka mid ah fiilooyinka ugu waxtarka badan ee maanta la iibsan karo. Qalabkani wuxuu si sax ah u sameeyaa waxa magiciisu soo jeedinayo: Waxay ku dareysaa waxyeelo cillad ah muuqaalkaaga waxayna leedahay dhowr ikhtiyaar oo aad u qabow sida awoodda lagu hagaajinayo cabirka, iftiinka, midabka, jahawareerka, iyo waqtiga. Qalabkaani wuxuu kaloo leeyahay noocyo kala duwan oo saameyn dhawaaq ah waxaana lagu qiimeeyaa qiyaastii $ 50.
Qalabkaan waxaa loogu talagalay inay naga caawiso inaan ku nooleyno halabuurkeena Adobe After Effects. Haddii aad aqoon u leedahay adduunka animation-ka waxaad ogaan doontaa inay jiraan habab gaar ah oo u baahan shaqo weyn oo aad u hawl badan. Waxaad sidoo kale ogaan doontaa in lagu sameeyo kinematics qalloocan 'After Effects' suurtagal maahan waana halkaan meesha ay ka imaaneyso qalabkan tan iyo mahaddiis waxaa suurtagal ah in la abuuro qaabab isku dhafan oo matalaya, tusaale ahaan, murqaha ama lafaha. Waxa ugufiican dhamaan, sheygan gabi ahaanba waa bilaash.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » 8 Adobe ka dib Raadka Plugins nashqadeeye kastaa waa inuu wax ka ogaadaa
Rubén Álvarez, farshaxamiistaha Isbaanishka ah ee sanadkaan abuuray Splash Screen of Adobe Photoshop CC 2015